गोरखा पुगेर भारतीय राजदूतले सोधे, 'बाबुराम भट्टराई कति लोकप्रिय छन् ?' - Sidha News
गोरखा पुगेर भारतीय राजदूतले सोधे, ‘बाबुराम भट्टराई कति लोकप्रिय छन् ?’
गोरखा। नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले गोरखामा बाबुराम भट्टराईको लोकप्रियताप्रति चासो राखेका छन्। गोरखाको पुनर्निर्माण अवस्थाबारे अवलोकन गर्न शनिबार आएका राजदूत पुरीले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रहेका भट्टराई लोकप्रियचाहिं कति छन् ? भनेर सोधेका हुन्।
गोरखकाली र गोरखनाथको दर्शन गरी गोरखा दरबारको अवलोकन गरेका पुरीले गोरखाको डाँडाबाट बाबुरामको घर कता पर्छ ? भनेर सोधेका थिए। ‘उनी गोरखामा कति लोकप्रिय छन् ?’ राजदूत पुरीले सोधे, ‘जनप्रतिनिधि हुन्, मन पराउँछन् होला नि ?’
नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रियासँग भारत सरकार सन्तुष्ट रहेको राजदूत मञ्जिवसिँह पुरीले स्पष्ट पारे। पुनर्निर्माणको अवस्थाको अवलोकन गर्न गोरखा आएका पुरीले चार वर्षको अवधिमा ८५ प्रतिशत पुनर्निर्माण हुनु सन्तोषजनक रहेको बताए। ‘नेपाल र भारत बीच मैत्री सम्बन्ध छ। त्यसैले हामी सँधै नेपाल र नेपाली खुसी रहेको देख्न चाहन्छौं।’पुरीले भने